Ciidanka xoogga Dalka oo howlgallo ay fuliyeen ku khaarijiyay horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan Alshabaab – Radio Muqdisho
Ciidanka xoogga Dalka oo howlgallo ay fuliyeen ku khaarijiyay horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan Alshabaab
Ciidamada Xoogga Dalka iyo kuwa Daraawiishta Jubbalandd ayaa sii kordhiayay howlgalada lagu beegsanayo saldhigyada maleeshiyaadka Alshabaab ay ku leeyihiin gobolka Jubada Hoose,iyagoo burburiyay xarumo ay ku dhuumaalaysanayeen Argagixisada ALshabaaab.
Howlgalkii ugu dambeeyey oo ciidamadu ay ka sameeyeen deegaanka Buulo Xaajo oo hoostaga magaalada Kismaayo ayaan lagu dilay ilaa 7 ka tirsan maleeshiyada Shabaab iyo horjoogayaal,iyadoo la burburiyay saldhig ay halkaasi ku lahaayeen.
Sarkaalka hogaaminayay howlgalkaasi oo ka dhacay deegaanka Buulo Xaaji oo lagu magacaabo Korneel Cali Goosaar ayaa Warbaahinta qaranka ugu waramay guulaha ay ka gaareen howlgalkaasi ka dhanka ah Alshabaab.
“Waxaa gutada 1-aad ee Darwiishta waxay burburisay saldhig cadowga uu ku lahaa Buula Xaaji,meydadadka ad arkaysaan waataliyohooda saldhig aiyo guddoomiyohoodi tuladda,anaga wax khasaare ah nama soo gaarin alxamdulilaah,dhimashadooda waa todobo,si nabad ah ayaa howshu ku fushay”. Ayuu yiri Col. Cali Goosaas.
Maleeshiyada alshabaab ayaa u muuqda in kuwo awood ahaan sii burburaya,kadib markii ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed ay sii xoojiyeen beegsiga lagu hayo maleshiyadaasi Alshabaab,qeybo kamid ah gobolada Dalka.
Madaxweyne Waare oo sheegay in dhawaan mashaariic laga hirgelin doono Hirshabeelle
Dawladda Talyaaniga oo balanqaaday inay dib u dhis ku samaynayso xarunta maxkamadda sare ee dalka